Drogba oo markale qaraw ku riday Macallin Wenger kaddib markii uu xalay saddexley ka dhaliyay… (Ciyaar ay ka qayb ahaayeen Pires, Flamini, Nasri iyo xiddigo kale) - Idman news
Drogba oo markale qaraw ku riday Macallin Wenger kaddib markii uu xalay saddexley ka dhaliyay… (Ciyaar ay ka qayb ahaayeen Pires, Flamini, Nasri iyo xiddigo kale)
(Stade Velodrome) 14 Okt 2021. Halyeyga Chelsea ee Didier Drogba ayaa muujiyay inuusan wali luminin xirfaddiisii gool-dhalineed kaddib markii uu saddexley dhaliyay xalay taasoo ciqaab kale ku noqotay macallinkii hore ee Arsenal, Arsene Wenger ciyaar sadaqo uruurin ahayd oo dhacday xalay.
Macallin Wenger ayaa tababarennimo hal kulan ah kusoo laabtay isagoo macallin u ahaa naadi ku ciyaareysay UNICEF XI kuwaasoo kahor tagay halyeeyada naadiga Marseille oo uu ka mid ahaa Drogba kaasoo macallinka reer France soo xusuusiyay waayihii Premier League oo uu goolal ka dhalin jiray marka ay Chelsea iyo Arsenal kulmaan.
Kooxdii uu hoggaaminayay Wenger ayaa hoggaanka ciyaarta ku heysay 2-1 ciyaartii ka socotay garoonka Stade Velodrome kahor inta uusan bandhigga la wareegin Kabtankii hore ee xulka Ivory Coast kaasoo saddexley shabaqa soo taabsiiyay isagoo muujiyay inuu wali yahay gool-dhaliye buuxa inkastoo uu saddex sano kahor ka fariistay kubadda cagta.
Si kastaba ha ahaatee, kulankan oo ay halyeeyada naadiga Faransiiska ah ku adkaadeen 7-4 ayaa waxaa sidoo kale kasoo qayb galay Robert Pires, Mathieu Flamini, Samir Nasri iyo Jens Lehmann kuwaasoo dhammaantood kasoo hoos ciyaaray Arsene Wenger intii uu macallinka u ahaa Gunners.
Dhinaca kale, Drogba iyo Wenger ayaa soo qaatay waqti xifaaltan oo qurux badan iyadoo weeraryahankii hore ee Blues oo 15 gool ka dhaliyay kooxda macallinkan kaddib 16 kulan oo uu ka hor tagay, waxaana 43-sano jirkan uu Chelsea u dhaliyay guud ahaan 164 gool isagoo u saftay 381 ciyaar.
Previous Bartomeu oo markale weeraray Laporta iyo dagaalkii afka ah ee madaxweynihii hore ee Barcelona kala dhexeeyay midka haatan oo soo laabtay – Gool FM
Next Newcastle United oo dagaalkeeda suuqa kala iibsiga ka bilawday Chelsea iyadoo si joogto ah ula xiriireysa wakiilka mid ka mid ah xiddigaha ugu qaalisan Blues